Metallurgy vovoka, bearings amin'ny bushing, girara - Welfine
Ny JIANDE SINFINE POWDER METALLURGY FACTORY. Any amin'ny tanàna HangZhou Jiande novolavolaina ara-toekarena, natsangana tamin'ny taona 2001, Winfine dia manana atrikasa namboarina 5000 metatra toradroa, ny taonina famokarana 500 taonina.
milina fanamainty mainty na firakotra mainty ...
Serivisy teknika, fampandrosoana teknika, fakan-kevitra ara-teknika, fifanakalozana ara-teknika, famindrana teknolojia ary fampalaza ny teknolojia; Famokarana bearings, gears ary faritra ampita; Fivarotana fitaratry, kabary ary singa fitaterana ...
Sampan-draharaha teknikan'ny injeniera zokiolona efa misy, teknisianina, mpanolotsaina teknika zokiolona mpanara-maso, manompo indostria isan-karazany amin'ny famokarana entana vaovao isan'andro izahay.
Amboary ny milina bobongoloo